Mareykanka oo xayiraad dhaqaale iyo mid militari saaraya Ethiopia
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad kusoo rogeysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Ethiopia sababo la xiriira eedo gaboodfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray, sida lagu sheegay warsaxaafadeed ay Axaddii soo saartay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Waxay sidoo kale xayiraad saareysaa saraakiil hore iyo kuwa hadda xilalka haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea, kuwaasi oo ay u aragto in ay mas'uul ka yihiin qalalaasaha.
Dhinacyada ku lugta leh "ma aysan qaadin talaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed," ayuu yiri.
Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bani'aadamnimada iyo deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia.
Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ee saaran Eritrea.
Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia in ay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda iyo tacaddiga, si loo ilaaliyo dadka rayidka ah, loona hubiyo in la helo marin xaddidaad la’aan loo marsiiyo gargaarka bani'aadamnimada.